Fannaanadii Saynab Xaaji Cali Baxsan oo geeriyootay | Berberanews.com
Home WARARKA Fannaanadii Saynab Xaaji Cali Baxsan oo geeriyootay
Muqdisho-(Berberanews)-Alle Naxariistii jano ha ka waraabiyee waxaa maanta magaalada Muqdisho ee xarunta Somalia ku geroyootay fannaanadii weynayd ee Saynab Xaaji Cali Baxsan.
Fannaanada ayaa sanadihii u danbeeyay ku sugnayd magaalada Muqdisho waxa sannadkii 2017 qalliin loogu sameeyay Cusbitaalka Blue Star ee magalaadda Muqdisho, waxaana hsalkaas ku booqday wefti uu hoggaaminayay Raysal-wasaarihii hore ee Somali Xasan Cali Khayrre.
fananada Saynab Xaaji Cali Baxsan waxay ka mid oo ka mid ahayd fananintii loogu jeclaa Kooxdii hobolladda waabari.
Previous article“Waxaan ardayda Jaamacadda Burco ka tacsiyadaynayaa dilkii Ugbaad.” M Biixi
Next articleIsrael iyo Baxrayn oo si rasmi ah u soo celiyeen xidhiidhkooda diblomaasiyadeed